गलकोट समाज जापानले आज बिहिबार राजधानी टोकियोमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दै ! – ebaglung.com
गलकोट समाज जापानले आज बिहिबार राजधानी टोकियोमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दै !
२०७६ पुष १७, बिहीबार ११:३७	Top News, अन्य समाचार, मनोरञ्जन, विविध
थम्मन थापा, जापान (टोकियो) २०७६ पुस १७ । गलकोट समाज जापानले बिहिबार राजधानी टोकियोमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दै छ । अङग्रेजी नयाँ वर्ष २०२० को अवसरमा बृहत साँस्कृतिक धमाका गर्न लागिएको संस्थाका अध्यक्ष दिलु खत्रीले जानकारी दिए । समाजले प्रत्येक वर्ष नयाँ वर्षमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दै आईरहेको छ । कार्यक्रममा नेपालबाट ख्यातिप्राप्त कलाकारहरुलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।
आज टोकियोमा हुने उक्त नयाँ वर्ष धमाकामा चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक प्रकाश सपुत, सम्झना लामिछाने, सुर्य खडका, प्रश्ना पाण्डे लगायतले आफनो सांगितिक प्रस्तुति मार्फत दर्शकलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नेछन ।विगतका वर्षमा समाजले जापानका विभिन्न शहरहरु ओसाका, नागोया र टोकियोमा बृहत साँस्कृतिक धमाका गर्दै आईरहेको छ । यस वर्ष भनें विशेष कारणबस टोकियोमा मात्र कार्यक्रम आयोजना गरिएको समाजले जनाएको छ ।
समाजले सन २००६ देखि जापानमा सक्रिय रहँदै आएको छ । स्थापनाकाल देखि नै समाजले गलकोटको विकास र समृद्विमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको संस्थाका महासचिव कृष्ण केसीले जानकारी दिए । रोजगारीको सिलसिलामा गलकोट देखि जापान आएका सम्पूर्ण गलकोटेहरुको साझा सस्थाको रुपमा परिचित गलकोट समाज जापानले नेपालमा आई परेका विभिन्न विपदका समयमा समेत सहयोग गर्दै आएको छ ।
नेपाली पन संस्कृति र परम्परा साथै भाषाको जगेर्ना गरि विदेशमा बस्दा पनि नेपाली पनका लागि नेपाली कलाकारहरुका साथ आफूहरुले प्रत्यक वर्ष साँस्कृतिक कार्यक्रम गर्दै आएको उनले बताए । हरेक वर्ष विभिन्न सामाजिक उद्देश्यका साथ समाजले साँस्कृतिक कार्यक्रम गर्दै आएको कार्यक्रम संयोजक बिजय भण्डारीले जानकारी दिए । संस्थाले यो वर्ष गलकोट क्षेत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य बोकेर कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । बिगतमा जस्तै यो बर्ष पनि गलकोट समाज जापानले विशुद्व परोपकारी कार्यमा जापानबासी नेपालीहरुको अपार मायाँ पाउने अपेक्षा गरेको छ । साथै समाजले नेपालमा कम आर्थिक अवस्था रहेका विद्यार्थीहरुको पढाई एवं स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । भुकम्प पछिको उद्दार एवं रहतमा आफुले राम्रो काम गर्दै आएको समाजले आगामी दिनमा पनि नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने जनाएको छ ।
समाजले गरेको कार्यक्रमबाट उठेको रकमबाट समाजले गलकोटमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरिने अन्तराष्ट्रिय गलकोट समाजका संयोजक तथा गलकोट समाज जापानका संरक्षक बेलुकाजी थापाले बताए । आज टोकियो निसी आर आई मा हुने बृहत सांस्कृतिक धमाकामा सहभागी भई कार्यक्रम भव्य रुपमा सफल पार्न समाजले अपिल समेत गरेको छ ।
बाटाकाचौरका दश सुत्केरी महिलालाई रातो भाले !